Blog-Tipping: My Blog Tababaraha | Martech Zone
Blog-Tipping: My Blog Tababaraha
Talaado, July 10, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Cadaadis ayaa saaran! Shonnie Lavendar, Blog Coach, ayaa iga codsatay inaan u soo bandhigo boggeeda - My Blog Coach: Fududee barashada barashada barta ee tababaraha Shonnie Lavender! Waxaan go aansaday inaan iska celiyo oo aan xoogaa aqrin ku sameeyo goobta Shonnie waana ku faraxsanahay inaan sameeyay!
Ma aaminsani in matalaad kufilan baraha bulshada ee haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay. Anigu ma ihi fursad loo wada siman yahay blogger, waxaan si fudud u maleynayaa in haddii aan si dhab ah wax uga baran doonno midba midka kale, markaa waxaan u baahan nahay matalaad ku filan oo dadka waawayn ah. Waan ku faraxsanahay inaan arko haween sida Shonnie ah oo halkaas jooga oo leh joogitaan xoog leh. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in ururada ay jecel yihiin BlogHer ku dhow yihiin - urur Shonnie si fiican u matalo!
Waxay sidoo kale noqon laheyd rajo la'aan inaan wax ka idhaahdo nuxurka Shonnie. Qaabka qoraallada, xoqidda nuxurka, iyo isticmaalka geesinimada, font, xigashooyinka, xannibaadaha, liisaska bulsheed… wow, dhammaantood waa hagaagsan yihiin. Waxaan raacayaa barta Shonnie si aan u soo qaato talooyin iyo tusaalooyin ku saabsan qorista waxyaabo ka sii fiican oo aan si fiican u muujiyo.
Waxaan jeclahay inta badan qaabka boggaaga. Ma ahayn illaa aan ka gaadhay boggaaga ku saabsan inaan runtii arkay shakhsiyaddaada, in kastoo. Saxiixu waa fikrad aad u fiican! Waxay muujineysaa shakhsiyad. Haddii aad heshay inaad aqriso mid ka mid ah qoraalladayda, waxaan u maleynayaa in sawir shaqsiyeed uu u qalmo kun farriimo (doh!). Taasi waxay tiri, waan yara jahwareeray anigoo fiirinaya sawirkaaga madaxa. Ma aanan hubin inay wakiil ka tahay.
Waxaan ku raaxeystay qaar ka mid ah Photoshop iyo Sawir qaade aniga oo kharashka bixinaya! Ii sheeg waxa aad u malaynayso!
Kadib (Guji si aad u aragto Cabir buuxa oo Download ah):
WARSIDAHA: Shonnie waxay sameysay xul aad ufiican!
Waxaan xushay sawirka Biriijka oo matalaya safarka aad akhristayaashaada ku qaadan doontid. Waxaan u adeegsaday ballaca guud ee maaddadaada si aan runtii u soo bixiyo midabada iyo sawirka. Waxaad isku dayi kartaa inaad dhab ahaantii ka dhigto cinwaankaaga blog-ka kan tan halkii aad ka hooseyn lahayd. Sidoo kale, waxaad u maleyn laheyd tan gadaasheeda bogga tab. kaliya kor u fekerka!
Waxyaabaha xiga ee aan ogaaday waa cinwaanka bogga wuxuu ahaa "Talooyin khabiir ah oo lagu hagaajinayo bartaada (bilaash)". U adeegsiga cinwaanka boostada cinwaan cinwaankiisu waa mid qurux badan! Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad raacdo "by My Blog Coach, Shonnie Lavendar". Taasi waxay kaa caawin doontaa makiinadaha raadinta inay iskuxiraan waxyaabahaaga, magacaaga, iyo dareenkaaga!
Waxaad ku haysataa faylka robots.txt saldhigga galkaaga, blogcoach… laakiin ma hubo inay runti ku caawinayso. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad geliso faylka 'robots.txt' saldhigga galka asalkaaga oo hubi inaad ku darto dariiqa khariidadaada bogga:
khariidadda bogga: http://shonnielavender.com/blogcoach/sitemap.xml
Waxaad ku haysaa khariidad mareeg oo ku jirta galkaaga blogcoach laakiin sida mashiinka raadintu u helo ?!
Isticmaalka cajiibka ah ee Qoraalada La Xiriira iyo Qoraaladii Ugu Dambeeyay. Waxaan kugula talin lahaa inaad udirto Qoraaladaada ugu dambeeya dhinacaaga hoostiisa macluumaadkaaga Subscribe, in kastoo. Xusuusnow in dadka badankood aysan ku dagi doonin boggaaga guriga, waxay ka heli doonaan maqaal iyada oo loo marayo mashiinka raadinta oo ay ku degaan mid ka mid ah boggaga boostadaada. Haddii aad u fiirsato bidix, inta badan Waqtiyadaada Ugu Dambeeya waxay hoos ugu dhacaan si ka hooseysa dhamaadka qodobka. Waxaan kugula talin lahaa inaad la jaan qaado aragtida dadka waawayn.
Mawduucaagu si wanaagsan ayaa loo dhisay. Waxaan kugula talin lahaa cinwaankaaga Blog inuu kujiro h1 cinwaanka cinwaanka, qoraaladaada kujiraan h2 cinwaan tag… adiguna waxaad ku rushaysaa cinwaanadaada hoose qoraaladaada h3 tags. Khabiiro badan oo SEO ah ayaa isku raacay in Mashiinnada Raadintu ay muujin doonaan salka ku haya meesha iyo sida aad u isticmaaleyso cinwaannada cinwaanka! (Laakiin sidoo kale waxay isku raacsan yihiin in h4 on saameyn yar ama aan lahayn.)
Waxaan ku arkay qaar ka mid ah farta yar yar, gaar ahaan dhinaca dhinaca. In kasta oo ay ku habboon tahay muuqaal ahaan, waxaan la yaabanahay haddii soo-booqdayaasha leh qaraarro waaweyn iyo kormeerayaal ay u baahan karaan inay indho-indheeyaan si ay u arkaan waxa aad ka kooban tahay. Si la yaab leh ayaa igu filan, waxaan xasuustaa markii qof walba u wareegayay farta yaryar. Hadda waxaan ogaanayaa iyaga oo u guuraya xarfaha waaweyn oo leh meel aad u badan. Copyblogger waa tusaale muuqda. Aniga shaqsi ahaan waxaan ku kordhiyay xarfaha farta qoraalkeyga iyo inkasta oo aanan hayn wax cadeyn ah, waxaan aaminsanahay inay hagaajisay goobta.
Dadku si dabiici ah ayey u janjeeraan gobollada cad. Asalka qaab-dhismeedkaagu gabi ahaanba waa caddaan. Waxaan u maleynayaa inay mudan tahay in lagu tijaabiyo midab yar oo asalka ah dhinacaaga iyo laga yaabee naqshad ama taariikh ku saabsan boggaaga oo dhan asalka bogga. Cunto uunbaa feker ah! Uma maleynayo inay wax u qabaneyso inay waxyeello u geysato bartaada, waa uun haddii aad rabto inaad diiradda saarto qodobbadaada oo aadan ka warwareegin - markaa xoogaa kala duwanaansho midabbada ah ayaa kaa caawin kara!
Waad ku mahadsantahay markale fursadaas cajiibka ah. Waxaan dareemayaa sida ayaxa oo kale oo isku dayaya inuu dhagaxa ka saaro gacanta sayidka! Waxaan rajeynayaa inaad ku qanacsan tahay jawaab celinta.
PS: Shaqada qabow ee gudbinta quudinta! Taasi ma waxay ahayd sheygan ama miyaad wax ka beddeshay faylkaaga htaccess si toos ah ugu gudbiso FeedBurner? Waxaan jeclaan lahaa inaan ka fikiro taas!
Tags: tababaraha blogmadaxa blogwac talaaboshakhsi ahaaneedrobots.txtshonnie lavendarKhariidadda boggakhariidada bogga xml
Blog-Tipping: Boostada Isku-kalsoonaanta
Blog-Tipping: Martida Blogger Blog
Jul 10, 2007 markay tahay 10:54 PM
OMG, Blog Blog kale! Waxaan qiyaasayaa inay tahay waqtigii aan kor u qaadi lahaa calanka cad oo aan helay niche kale.
Qoraaladaadu si aad ah ayey u wanaajiyeen Doug. Sii wad howsha wanaagsan.
BB (tababarihii ugu horreeyay ee blog ah 🙂
Jul 11, 2007 markay tahay 9:22 PM
Mahadsanid BB! Kaa imanaya adiga, macnaheedu waa wax badan !!! Runtii waan ku qanacsanahay dareenka iyo dhiirigelinta aad siisay.
Jul 11, 2007 markay ahayd 9:24 AM
Akhris xiiso leh, Doug… Waxaan si gaar ah u jeclahay sawirkaaga madaxa ee Photoshop oo ku ciyaaraya sawirka buundada… In kasta oo aan ka shaqeeyo 99% waqtiga Adobe Fireworks, hadana waxaan sameeyaa hada in PS sidoo kale ay tahay qalab aad u fiican 🙂
Jul 11, 2007 markay tahay 1:02 PM
Aad ayaan ula dhacay guud ahaan - laakiin ka faallooda baraha dadka kale, waaw! Ma lacag baad ka bixisaa tan? Waa inaad sameysaa
Jul 11, 2007 markay tahay 2:36 PM
Waa maalgashi akhristayaasha ah, Clive. Waa wakhti qaadasho - waana hubaa inaan uqalmo lacag-bixin - laakiin waxaan si fudud uga shaqeynayaa inaan durbaan u tego xoogaa soo-gaadhis ah balooggeyga.
Oo ay shaqeyneyso!